Cumar Filish iyo ku-xigeenkiisa oo Musuq-maasuq isku qabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Labada Mas’uul ee ugu sareysa maamulka Gobolka Banaadir, ayaa isku qabtay Musuq-maasuqa Mashruuc Bangiga Adduunka [World Bank] uu Dec 2019 ku bixiyay $112 milyan oo Muqdisho lagu hormarinayo.
MUQDISHO - Duqa Muqdisho Cumar Filish iyo ku xigeenkiisa C/qaadir Maxamed ayaa isku qabtay Mashruucan, oo midba midka kale uu doonayo inuu musuq-maasuqo, oo lacagta loogu talo-galay akoonkiisa ku shubto.
Labo warqaddood oo kala duwan ayay u kala direen bishan Bangiga Adduunka, sida Keydmedia English ay kusoo qortay bogga Twitter, wuxuuna gudoomiye ku xigeenka Cumar Filish ku eedeynayaa inuu ku tagri-falayo mashruucan lagu horumarinayo Caasimadda.
Keydmedia Online ayaa heshay warqadaha oo ku kala taariikhaysan, mida gudoomiye Cumar Filish uu diray 3-dii February 2021 iyo mida uu ku xigeenkiisa oo la diray saddex maalin kadib, 7-dii Febuary 2021.
Warqadan waxay u direen Kristina Svensson, oo ah gabsni[ar madax uga ah World Bank Bariga Afrika.
World Bank ayaa $112 Milyan ugu deeqay Mashruuca “The Somalia Urban Resilience Project (SURP)” oo loogu talo-galay in dib u dhis loogu sameeyo Caasimadaha Maamul Goboleedyada dalka Soomaaliya.
Gudoomiye ku xigeenkiisa G/Banaadir C/qaadir Maxamed ayaa ku eedeeyay Cumar Filish inuu lunsaday lacagtii loogu talo-galay Muqdisho, iyadoo uu ka eryaya shaqada mas’uuliyiintii u qaabilsanaa howshan fulinteeda, kuwaasoo uu kamid yahay iskuduwaha mashruuca Cumar Xasan.
Cumar Filish wuxuu xafiiska keensaday dad ay qaraabo dhaw yihiin, oo ku qoray qaab sharci-darro ah, oo aan waafaqsanayn nidaamka shaqaaleysiinta dowladda Hoose ee Xamar, taasoo ah musuq-maasuq kale.
“Waxaan warqaddan adinku soo qorayaa inaan adiin muujiyo in aan ku qanacsanayn go’aanka aan cadaaladda ahayn ee Cumar Filish, duqa Muqdisho,” ayu uku yiri qoraalka C/qaadir Maxamed.
Wuxuu intaasi ku daray in dhowr jeer isku dayay inuu gudoomiyaha ku qanciyo inuu la kulmo si ay uga wadahadlaan sida loo maareynayo mashruuca lacagta ku baxaysa, balse uu ka diiday soo jeedinta.
C/qaadir wuxuu ogaaday in Cumar Filish ujeedkiisu ahaa inuu rabo dad gaar ah inuu u dhiibto Mashruuca horumarinta, islamarkaana uu isaga maamulo lacagta Bangiga Adduunka ku bixinayo.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa ka digay dhibaatada ka imaan doonto Mashruucan, oo ay kamid yihiin xasilooni darro, musuq-maasuq iyo in lacagta dano gaar ah loo isticmaallo, islamarkaana aan lagu qaban shaqadii loogu tala-galay oo ah in wadooyinka burbursan ee Muqdiso lagu dhiso, nalalka cad-caadda ku shaqeeya lagu geliyo iyo in bullaacado lagu dhiso, maadaama xiliga roobka biyo fariistaan laamiyada.